Relationships Archives ⋆ Lovely Myanmar
ချစ်သူ၊ ရည်းစားတွေပြုလုပ်သင့်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားအားရဖွယ် အတွေ့အကြုံအသစ်များ
လူသားတိုင်းဟာ ဘဝကြီးကို သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ ချစ်ရသူတို့နဲ့ အတူတကွ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းချင်ကြတာ ဧကန်မလွဲပင်ဖြစ်ပါတယ်…။ အကယ်၍ သင်ဟာ သင်ချစ်တဲ့သူ၊ သင်ရဲ့မိတ်ဆွေ၊ နောက်ဆုံး သင်ရဲ့ ပါတနာ တို့နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတာ အဆင်မပြေဖူးဆိုရင် သင်နဲ့သူတို့ကြားမှာ မထင်မှတ်တဲ့ အဖုအထစ်လေးတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်…။ တစ်ချို့အရာတွေဆို ကိုယ်ကိုတိုင် သတိမထားမိတဲ့ သေးငယ်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပေမယ့် မပြုပြင်ပဲ ဒီအတိုင်းထားမယ်ဆို နောက်ဆုံး ပြုပြင်လို့မရတဲ့ အမှားကြီးတွေထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..။ များပြားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာဆိုရင် အချစ်ရေးအဆင်မပြေပဲ နောက်ဆုံးလက်ခွမ်းရတဲ့ အထိ ဖြစ်သွားကြရပါတယ်…။ ဒါက ဘာကြောင့်လည်းလို့ မေးခွန်းထုတ်ရမယ်ဆိုရင် အဖြေကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ…။ “မျှတတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေမရရှိပဲ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုတွေ မပေးနိုင်တာကြောင့်”လို့အများဆုံး ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်…။ ကဲစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရေ….”ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဘဝကြီးမှာ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေအပြည်နဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ၊ …
သင့်ချစ်သူရဲ့နှုတ်က ဒီစကား (၅)ခွန်းထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ
လူတော်တော်များများက အပြောထက်အလုပ်က အဓိကကျတယ်လို့ ခံယူကြပေမယ့် အပြောကနေတစ်ဆင့် လုပ်လာမယ့်အရာတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်း၊ အမူအကျင့်၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို သူပြောတဲ့စကားတွေကနေတစ်ဆင့် သိလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ချစ်သူဆီက ဒီစကား (၅)ခွန်း ဒါမှမဟုတ် ဒီအထဲက တစ်ခွန်းကိုပဲကြားဖူးတယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့။ ဘယ်လိုမှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ (၁) အပိုတွေလုပ်ပြန်ပြီ ယောက်ျားတစ်ယောက်၊ ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ဒီလိုမစော်ကားသင့်ပါဘူး။ သင်ဟာ ရက်တွေဆက်ပြီး စိတ်ဖိစီးနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ သူ့ဖက်ကကြည့်လို့ အသေးအမွှားလို့ထင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေတောင် သင့်အနေနဲ့ကြည့်ရင် အရမ်းပင်ပန်းကောင်းပင်ပန်းနေမယ်။ သင့်ဘာသာသင် အပိုတွေလုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်ကို နှစ်သိမ့်ပေးရမှာ သူ့တာဝန်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အပိုတွေလုပ်နေပြန်ပြီ ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသက်ရောက်တဲ့ စကားကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်လမ်းခွဲလိုက်ပါ။ သင့်အပေါ်မှာ နည်းနည်းလေးမှ ညှာတာ၊ သနားစိတ်မရှိတဲ့သူကို အချိန်ကုန်ခံဆက်တွဲမနေသင့်တော့ပါဘူး။ (၂) နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်ရင်… ဒီလိုစကားဟာ အစပိုင်းမှာတော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် သင့်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေ …
လက်ထပ်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးစေနိုင်တယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
လက်ထပ်ပြီးသားဇနီးမောင်နှံတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းတယ်လို့ပြောရင် ပိုတယ်လို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ထပ်ပြီးသူတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းတာ တကယ်ဟုတ်ပါတယ်။ လက်ထပ်ခြင်းက ကော်တီဇောဟော်မုန်းကို နည်းစေတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေဖျောက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း မတွေ့သေးရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကိုပဲ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ စိတ်ကူးထဲကလို လွယ်လွယ်ကူကူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ထပ်ပြီးသားသူတွေက သူတို့ချစ်ရသူနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို သတိရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတွေကို အတူတူဖြေရှင်းတဲ့အခါ စိတ်က အနည်းနဲ့အများတော့ သက်သာရာရပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ နောက်ထပ်ပုံစံတူပြဿနာတွေ ရှိလာခဲ့ရင်လည်း သိပ်ပြီးတုန်လှုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အားပေးမယ့်၊ အကြံပေးမယ့်၊ ဖေးမပေးမယ့် တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက် တစ်ယောက်လုံး ဘေးမှာရှိပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ ပြဿနာတွေကို တစ်ယောက်တည်း ဖြေရှင်းတာထက်စာရင် နှစ်ယောက်အတူတူ ဖြေရှင်းတာက ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ ပညာရှင်တွေက လက်ထပ်ပြီးသူ၊ အိမ်ထောင်မရှိသူ၊ အိမ်ထောင်နှင့်ကွဲနေသူ၊ အိမ်ထောင်ဖက် …
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကုို ချစ်ရေးဆုိုရင် အငြင်းမခံရဖုို့ အတွက် ရှောင်ရန်အချက်များ
By Aung Aung on Saturday, July 6, 2019
နှုတျဆကျစကား မှားယှငျးပွောဆိုခွငျး Chat Box ကနေ Hi, Hello, Hey ဆိုတာတှပေဲပို့ထားပွီး ဆကျမပွောသေးပဲ သူ့ဘကျက Reply စောငျ့ခွငျး။ အပွငျမှာတှရေ့ငျလညျး စစခငျြးမှာပဲ အရမျးလှလာတယျနျော ဘယျလို ဘယျညာ အပိုလြှောကျပွောခွငျး။ ဒီလို ရူးကွောငျကွောငျစကားလုံးတှေ၊ အပွောအဆိုတှကေို ဘယျမိနျးကလေးကမှ မကွိုကျပါဘူး။ ကောငျမလေးနားကို ခညျြးကပျဖို့အတှကျ သူဘာစိတျဝငျစားတတျတယျဆိုတာတှနေဲ့ သူဘာတှသေဘောကတြတျလညျးဆိုတာကို အရငျလလေ့ာပါ။ သူသဘောကမြယျ့ အရာတှနေဲ့ပဲ အစပြိုးပါ။ – မေးခှနျးမြားခွငျး ဘယျရောကျနလေဲ၊ ဘာလုပျနလေဲ၊ စားပွီးပွီလား၊ ဘာလုပျဖို့ရှိလဲ အဲ့ဒီမေးခှနျးတှကေ တဖကျလူကို တျောတျောလေးကို စိတျရှုပျစပေါတယျ။ ကိုယျနဲ့ ဘာမှမဟုတျတဲ့ ယောကျြားလေးတဈယောကျက ဒီလို စပျစုတဲ့မေးခှနျးတှေ လာမေးတာ လုံးဝမကွိုကျကွပါဘူး။ – တှဆေုံ့ဖို့ ခြိနျးဆိုခွငျး ရငျးနှီးတာ တဈလလောကျတောငျမပွညျ့သေးတဲ့အခြိနျ၊ ဘာမှရရေရောရာ …
By Aung Aung on Saturday, June 29, 2019
မိန်းကလေးတော်တော်များများကပန်းတွေကိုနှစ် သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှပန်းတွေကို အထူးတလည်မနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးအနည်းစုလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပန်းတွေကိုမနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေ… အချစ်ကိုစဉ်းစားပုံအကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးမယ်နော်။ သူတို့လေးတွေဟာရုပ်ရည်အလှအပကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းသူတွေဖြစ်ကြပြီး အရည်အချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလှအပကိုသာမြတ်နိုးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ထူးကိ်ုယ်ချွန်နဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ရပ်တည်နေကြသူပါ…။ သည်းခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့အတွက် ရည်မှန်းချက်ကိုမြန်မြန်ရောက်လွယ်သလို သူများတကာရဲ့ချိုးနှိမ်မှုတွေကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်။သည်းခံတာကိုအခွင့်ကောင်းယူတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဖော်ရွေတာကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါတတ်တာကြောင့် တိတ်တိတ် ပုန်းကိုယ့်ကိုမကောင်းကြံစည်ပြီးမနာလိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ရဲရင့်ထက်မြက်ပြီး အောင်မြင်ဖို့ကိုအမြဲတမ်းတွေးဆနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ရေး နဲ့ပတ်သတ် ရင်တော့ကံမကောင်းတတ်ကြသူတွေပါ။ သူတို့ဟာအင်မတန်ထက်မြက်နေတာကြောင့်သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့သူရှားပါတယ်…။ လူတွေကပန်းမကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကို မာကျောသလိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ အတွင်းစိတ်အရမ်းနူးညံတဲ့သူလေးတွေမို့…သူတို့ကိုချစ်မိတဲ့သူလေးတွေကအထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ Credit:marry Unicode မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားကပနျးတှကေိုနှဈ သကျကွပါတယျ။ အဲ့ထဲမှာမှပနျးတှကေို အထူးတလညျမနှဈသကျတဲ့မိနျးကလေးအနညျးစုလညျးရှိပါသေးတယျ။ဒါကွောငျ့ပနျးတှကေိုမနှဈသကျတဲ့မိနျးကလေးတှရေဲ့စိတျနစေိတျထားလေးတှေ… အခဈြကိုစဉျးစားပုံအကွောငျးတှကေိုမြှဝပေေးမယျနျော။ သူတို့လေးတှဟောရုပျရညျအလှအပကိုစိတျဝငျစားမှုအားနညျးသူတှဖွေဈကွပွီး အရညျအခငျြးကွောငျ့ဖွဈပျေါလာတဲ့အလှအပကိုသာမွတျနိုးတတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ကိုယျ့ထူးကျိုယျခြှနျနဲ့ တဈကိုယျတျောရပျတညျနကွေသူပါ…။ သညျးခံနိုငျစှမျးမွငျ့မားတဲ့အတှကျ ရညျမှနျးခကျြကိုမွနျမွနျရောကျလှယျသလို သူမြားတကာရဲ့ခြိုးနှိမျမှုတှကေိုလညျးခံရတတျပါတယျ။သညျးခံတာကိုအခှငျ့ကောငျးယူတဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ဖျောရှတောကွောငျ့ လူခဈြလူခငျပေါတတျတာကွောငျ့ တိတျတိတျ ပုနျးကိုယျ့ကိုမကောငျးကွံစညျပွီးမနာလိုတဲ့သူတှလေညျးရှိတတျပါတယျ။သူတို့ဟာ ရဲရငျ့ထကျမွကျပွီး အောငျမွငျဖို့ကိုအမွဲတမျးတှေးဆနတေဲ့ မိနျးကလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။အခဈြရေး နဲ့ပတျသတျ ရငျတော့ကံမကောငျးတတျကွသူတှပေါ။ သူတို့ဟာအငျမတနျထကျမွကျနတောကွောငျ့သူတို့နဲ့လိုကျဖကျမဲ့သူရှားပါတယျ…။ လူတှကေပနျးမကွိုကျတဲ့မိနျးကလေးတှကေို မာကြောသလိုထငျရပမေဲ့တကယျတမျးတော့ အတှငျးစိတျအရမျးနူးညံတဲ့သူလေးတှမေို့…သူတို့ကိုခဈြမိတဲ့သူလေးတှကေအထူးဂရုစိုကျပေးဖို့တော့ လိုမယျနျော။ Credit:marry
ရည်းစားအဖြစ်တောင် လုံးဝမတွဲသင့်တဲ့ ယောက်ျားညံ့ ( ၁၀ ) မျိုး
1) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ပါတယ် လို့ ပြောပြီး နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား 3) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တာဝန် ယူချင်စိတ် မရှိသော ယောင်္ကျား 2) သူပျင်းမှ ဖုန်းဆက် သူစိတ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်ဆို အဖတ်မလုပ် ရှိတယ် လို့တောင် မထင်တဲ့ ယောင်္ကျား 4) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကို မငဲ့ကွက်ဘဲ ယုတ်ညံ့စွာ ပြောဆိုတတ်သော ယောင်္ကျား 5) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ပျော်တော်ဆက် တစ်ယောက်လို သဘောထား တတ်သော ယောင်္ကျား 8) ကတိ မတည်သော ယောင်္ကျား 6) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ရန်ဖြစ်ရင် လက်ပါတတ်သော ယောင်္ကျား 7) ကိုယ့် …
By Aung Aung on Thursday, June 27, 2019
အခုခေတ်မှာ ရည်းစားစကားပြောဖို့ဆိုတာ ရေထသောက်တာထက်တောင် ပိုလွယ်ပြီး ၊ ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိနေတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကို လာပတ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကိုရမလားဆိုပြီး သွေးတိုးစမ်းတာလား၊ အပျင်းပြေရောရင်း ရရင်အမြတ်ပဲလို့သဘောထားနေတာလား၊ လာကစားနေတာလား၊ တကယ်ပဲကြွေနေတာလားဆိုတာ ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုလာပတ်သက်နေတဲ့သူက တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘဲ ကစားရုံသက်သက်၊ သွေးတိုးစမ်းရုံသက်သက်ပဲရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ ဒီအချက်တွေက သက်သေပြနေပါလိမ့်မယ် ….. ။ (၁) အဆင့်ကျော်တဲ့စကားတွေကိုခပ်တည်တည်ပြောနေမယ် ကိုယ့်ဘက်က သူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောရသေးဘဲ၊ နှစ်ယောက်သားက ချစ်သူ၊ရည်းစားတွေလည်းမဖြစ်သေးပါဘဲ ချစ်သူ၊ရည်းစားတွေလို စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေပြောတာမျိုး၊ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားတွေမှာ သာယာမိရင် ကိုယ်ပဲစိတ်ညစ်ရမှာပါ …. ။ (၂) ဘာကိုမှအလေးအနက်မထားဘူး ကိုယ့်ကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်တစားမရှိဘဲ ၊ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်း မမှတ်မိဘူး၊ သူကိုယ့်ကိုပြောပြီးသားတွေကိုလည်း ထပ်တလဲလဲပြန်ပြောနေမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် သူဟာသင့်ကိုမချစ်ပါဘူး …. ။ …
တချို့ကောင်လေးတွေဟာ ချစ်သူကို နင့်နေအောင်ချစ်ပေမယ့် သူတို့ ချစ်တာကို စကားတွေနဲ့ ဖော်မပြတတ်တာကြောင့် ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ အထင်လွဲခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ချစ်နေရင်ပြီးတာပဲလို့ တွေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်တွေကို ထုတ်မပြဘဲ နေလိုက်မယ်ဆိုရင် ချစ်တဲ့သူကိုတောင် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ကွီးတို့ ညေးတို့ ချစ်သူကို သိပ်ချစ်တဲ့အကြောင်း ဖော်ပြဖို့ ဒီလိုချီးကျူးစကားလေးတွေကို မကြာခဏပြောပေးပြီး ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ နှလုံးသားတွေ အရည်ပျော်အောင် လုပ်လိုက်နော်။ (၁) သူမရဲ့ပင်ကိုယ်အလှကို ချီးကျူးခြင်း ငါတွေ့ဖူးသမျှ မိန်းမတွေထဲ မင်းကအလှဆုံးပါပဲ၊ မင်းလောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့သူ မတွေ့ဖူးဘူး..စသဖြင့် အပိုစကားတွေ ပြောတတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ “သတိထားမိသလောက် ဒီနှစ်တွေမှာ ပိုပိုကြည့်ကောင်းလာတယ်၊ ပိုလှလာတယ်” အဲ့ဒီလိုလေးတွေ ပြောပေးရင်ရပါပြီ။ အဲ့ဒီလိုစကားကို ကြားရတာဟာ သူမတို့ အလှအပအတွက် အချိန်ပေးရကျိုးနပ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေပြီး …
By Aung Aung on Monday, June 24, 2019
အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းကြတဲ့ O သွေးလေးတွေရဲ့ အကြောင်း” အိုသွေး… အမတန် အစသန် ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ပျော်အောင် နေတက်တယ် အသေးမွား ကိစ္စတွေကို ထုတ်မပြောဘူး အမတန် နှုတ်လုံတယ် ဘယ်သူကိုမှ ကုန်းမတိုက်တက်သူ သူ စိတ်မပါရင် စကားတောင် မပြောဘူး တချို့သူတွေ ပြောတယ် လေကုန်မှာ စိုးလို့လား ဆိုပီး အဲလောက်ထိ တိတ်ဆိတ်နေတက်တာ ပြောပြီဆိုလည်း ပြောပါတယ် ဆိုတဲ့သူထက် ပိုပြောတယ် လိုချင်တဲ့ အရာတခုခုကို မရရအောင် ယူတက်တယ် လိုချင်ပြီဆိုပေါ့ လူတိုင်းနဲ့ ပြေလည်အောင် နေတတ်တယ် စိတ်ဓါက်ကတော့ မှန်လိုဘဲ သူကို ရီပြရင် ပြန်ရီပြလိမ့်မယ် ငိုပြရင် ပြန်ငိုပြလိမ့်မယ် မသိတဲ့သူက စိတ်ဓါတ်မာကျောမယ် ထင်လိမ့်မယ် အမှန်တော့ အမတန် စိတ်ထားနူးညံ့တာ …
မိန်းကလေးတွေ အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဒါလေးတွေ လုပ်တတ်တယ်..
By Aung Aung on Sunday, June 23, 2019
မိန်းကလေးတွေ အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဒါလေးတွေ လုပ်တတ်တယ် အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ နားချချ နားမ၀င် နိုင်တော့ဘူး… အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့် ချစ်သူကို မကောင်းဘူး ပြောလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နိုင်သွားတယ်.. အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ် လက်တွဲမဲ့သူ မပြည့်စုံတာ သိပေမယ့်လည်း အတူတူ ရင်ဆိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချသွားနိုင်တယ်.. အရမ်းကို ချစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ချစ်သူက ဘယ်လောက် အနိုင်ယူယူ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့သည်းခံခွင်လွှတ် နိုင်သွားတယ်.. အရမ်းကို ချစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်အတွက် ဆိုတာ မေ့ပြီး သူ့အတွက် ဆိုတာကိုပဲ …